Semalt Inotsanangura Nzira Yokudzivisa Sei Kudhinda-Kuwedzera Kunowedzera MuWindows
Kubva muna 2017, zvakanaka kutaura kuti teknolojia yakatora hupenyu hwedu kwenguva yakati ikozvino. Indaneti iri ikozvino inoshandisa zviyero zvakawanda uye zvepamusoro kwechipiri kwega, uye huwandu hwemashoko anopfuura nawo hukuru zvikuru. Maererano naLisa Mitchell, we Semalt Mutungamiri Wekubudirira Kwemutengi, izvi zvinounza mikana yakawanda uye zvinobatsira, asi zvinouyawo nemamwe mashoma, rimwe rayo rinowanzogumbura vashandisi: kutarisana nepap-up ads !
Kana uri kutamba Windows paPC yako, hapana mubvunzo kuti wakatarisana nechinetso ichi muupenyu hwako. Mushure mekuisa hurongwa, zvinhu zvose zviri kufamba zvakanaka, uye hapana mamiriro evanhu vane pop-ups, anotanga kuonekwa mushure mekushandisa zvishomanana zvidzidzo. Mushure mekunge nguva ino, dambudziko rinowedzera kurwadza kugadzirisa, kunyange zvazvo pasina imwe yezviziviso izvi inosanganiswa neWindows pachayo. Muchikamu chino, tinoda kuratidza nzira shomanana dzokugadzirisa imwe yezvinetso zvakakosha zvekushandura kwewebhu: sei kudzivisa matanho ekupup-ups.
Tisati tatanga nekunatswa, tinoda kutora nguva kuti titsanangure kuti idzi idzi dzinobva kupi. Sezvo vasingabvi paWindows, mavambo avo anowanzowanzo pawebsite dzinoisa malware, adware kana kunyange PUPs (Potentially Unwanted Programs). Mazana emapurogiramu anowanzoita kuti vanhu vauye ivo pachavo, iyo imwe chikamu chechinetso. Pasinei nokuti yakabva kupi, kudzivirira pop-ups ndiyo nzira mbiri: kutanga, tsvina kombiyuta yako chero ipi zvayo yemarware kana adware, uye shandisa shanduro yakadzika kudzivirira vanhu vari mumitambo yavo.
Hezvino zvinhu zvishomanana zvaungaita:
1..Chenesa windows yako system. Kazhinji, kushanda chirongwa chema anti-virusi chakafanana neAVG hachina kukwana. Iwe unoda zvakanakira, unyanzvi hwehutano, hwakadai seMalwarebytes Anti-Malware, chidimbu chepurojekiti yakanyatsorongedzerwa kubvisa chero mishonga inowanikwa yakawanikwa pane kombiyuta yako. Saizvozvowo, unogona kushandisa purogiramu yakadai seAdwCleaner kubvisa Adware. Aya mapurogiramu ose akasununguka kushandiswa uye anobatsira zvikuru, ingoyeuka paunenge uchishandisa, sezvo iwe usingadi kubvisa chimwe chinhu chakakosha nengozi kana nekudzivirira.
2. Isa shanduro add-ons. Vakawanda vanowedzera-ons vanobata pane dzimwe browsers: Google Chrome, Firefox, Edge, Opera kana Safari. Izvi zvinowedzera-ons zvakananga pakuongorora magwara uye kudzivirira chero upi zvavanowana. Nzvimbo yacho inogona kuwanikwa pasi pemenyu ye "Content" mumusarudzo yetsvairi, uye inonzwika chimwe chinhu mumiganhu ye "Usabvumira chero nzvimbo yepaiti kuratidzira vanhu" - muenzaniso uyu unobva ku Chrome. Kunyange zvazvo vashandisi vachiuya nevhareji yavo yepop-up, tinokurudzira kuisa imwezve yakadai seFreeery, Block Origin kana AdBlock pamwe chete.
3. Stop foistware uye Windows ads. Pane mawebhusayithi evhutiro anofanirwa kushandisa map-ups, saBvunza, Microsoft Bing kana Google. Izvi zvinowanzogadzirisa PUPs kuburikidza kana iwe ukasarudza shanduro yekujekesa yekuisa chero chimwe chezvinhu zvavo. Zvichida fungisisa zvaunotarisa kana kutarisa panguva yekugadzirisa, kana kushandisa sangano rakanaka rinonzi Unchecky, rinogona kukuitira iwe kunyange mushure mokunge waisa software.
Uyezve, Windows 10 kunyange ine pop-ups ikozvino. Kwete seinovhiringidza sevamwe, hongu, asi iyo inopa "mapurogiramu anonzi" mumutambo wekutanga. Kuti ubvise avo, tsanangurira zvakanaka pane tile uye sarudza "bvisa mazano ose."
Tinotarisira mirayiridzo yedu pamusoro pekuregedza kuwedzera-ons kuchavandudza zvikuru kuongorora kwako uye ruzivo rwekutsvaga web. Mapap-ups ndechimwe chezvinhu zvinoshungurudza zvikuru zvekutarisana nazvo munguva ino, uye hapana-munhu anofanira kutambudzika kupfuura izvo zvinodiwa Source .